Poltava - magaaladan weyn ugu galay si ay u bartaan dawada ee Ukraine iyo Yurub
Poltava waa magaaladii Ukraine iyo xarunta maamulka gobolka Poltava. Waxaa ku taal-North East of our dalka, on dooxada Pridneprovskaya iyo been on qararka webiga Vorskla. record ugu horeeya documentary magaalada taariikhaysan qarnigii XII ku saabsan. Tan iyo markii 27-th, February ilaa 3-d, June 1925 waxay ahayd xarunta maamulka gobolka Poltava. Magaalada waxay leedahay astaan ​​u gaar ah iyo calanka. Poltava waa xarun muhiim ah oo dhaqanka iyo gaadiidka weyn a dhibic patrilineal. square Magaaladii waa la 104.42 km² oo u qaybsan yahay 3 degmooyinka ugu waaweyn (Oktyabrskiy, Kievskiy iyo Leninskiy). Tirada dadka ee magaalada waxaa lagu qiyaasaa 300,5 kun oo qof. Hay'adaha dawladda hoose waxaa lagu soo bandhigay by golaha deegaanka maxalliga ah iyo kuwa madaxa magaalada (duqa magaalada).
Poltava ku taalaa qaybta Bari ee Europe, in 301 km Bariga si ay Kiev.
wadataa dhuleed: 49° 00`35“N 34 ° 00`33“E, 140 m heerka kor ku badda. Magaalada waxa uu ku yaalaa on dooxada Pridneprovskaya iyo been on webiga bangiyada Vorskla. Mid ka mid ah webiga ee la shekeysan waa Kolomak in la barwaaqaysan galay Vorskla magaalada dhexdeeda ah. Sidoo kale, maka Poltava gudahood waxaa jira qaar ka mid ah haraha dabiiciga aan si weyn oo barwaaqadii oo ka mid ah balliyada macmal. gargaarka City, inta badan, xataa, laakiin on fog ee 1,5 km ka mid webiga ka arki kartaa jiirada af (Vorskla ee bangiga xaq u, halkaas oo Poltava waxaa ku sugan - dheeraad ah oo af badan, hills height u kicin inay soo 80-100 xad m heerka webiga). booska dhuleed ee Poltava waa halkii faa'iido iyo in koorsada ee taariikhda aad bay u saamayn horumarinta magaalada. Poltava taagan on kuwan raadkaygay gaadiidka aad u muhiim ah. magaalada Our waxay bixisaa adeeg xiriirka ka dhexeeya magaalooyinka ugu weyn ee Ukraine: Kiev, Kharkov iyo Dnepropetrovsk.
Guud ahaan cimilada magaalada waa qoraxda, continental la qaboobaha qabow iyo diiran (xagaaga mararka sultry). heerkulka celceliska bisha Janaayo sida ay indha-indhaynta muddada-dheer waa 6.8 Centigrade degree hoos ku eber. Summer waa diiran oo qalalan. Bisha kulul yahay July, sida caadiga ah. Heerkulka celceliska ah ee July waa 20.9 Centigrade degree kor ku eber. Inta lagu jiro ee la soo dhaafay 100 - 200 sano heerkulka ee Poltava, iyo sidoo kale in adduunka oo dhan, uu leeyahay u janjeera in la kordhiyo. Inta lagu jiro wakhtigan al heerkulka sanadlaha celcelis ahaan kor u kacay ku dhowaad on 1,5 ° C. Sannadka diirran, sida ay daawashada muddo-dheer, wuxuu ahaa sannaddii of 2010. u kaca ugu weyn ee heerkulka ka dhacay lixdii bilood ee ugu horeysay. In Poltava, roobab sanadlaha celcelis ahaan waa 569 mm (ugu yaraan bishii February - March, ugu of dhan - in July). jiilaalka kasta oo ay jirto cover baraf a, height ugu badan ee kaas oo inta badan lagu arkay February. qoyaan qaraabo Celceliska waa 74%, kan ugu yar May (61 %), ugu of dhan ee December (88 %).
Sida laga soo xigtay tirakoobka gobolka on 1-st, January 2010, dadka magaalada ku jiray 300, 5 kun oo qof. Waxaa la dhimay si 14 kun oo qof marka la barbardhigo sannadkii ka mid ah 1989 - Iyo ma aha tilmaame si xun, iyada oo la tixgelinayo xaaladda dadka ee Ukraine (tusaale ahaan, dadweynaha ee Lvov ilaa hoos si 57 kun oo qof muddo this waqti). Poltava mugga dadweynaha uu yahay in ka badan 3000 halkii km². 87% dadweynaha magaalada yihiin Ukraine; 44, 0% dadka of adag-shaqeeya ay ku lug galay gudbikaraa warshadaha; 16, 0% - Galay gudbikaraa adeegga; 6, 0% - Galay sayniska, fanka iyo waxbarashada.
Poltava waa dhibic gaadiidka weyn North-East patrilineal of Ukraine. magaalada Our waa meel, meesha jidadka tareemada muhiim ah oo jidadkayga waxaa yaalana. Waxaa jira shabakad gaadiidka weyn iyo in la horumariyo dadweynaha. Poltava waa xarun muhiim ah oo gaadiidka xamuulka. Waxay ku taalaa isgoyska jidka weyn in mideeya qaybaha galbeedka iyo bariga ee Europe ah. Poltava ku xidhan yahay la Kiev, Kharkov, Dnepropetrovsk, Sumy iyo Kremenchug ay sabab u tahay jidadka waaweyn.
Waxaa jira routs gaariga sida in maraan Poltava:
E 40 - Jid Kiev-Kharkov (jihada Bari - Chutovo, Kharkov; jihada Western - Horol, Lubny, Kiev);
H-12 - wadada gaariga Qaranka (Kotelva, Ahtirka, Sumy);
M-22 - wadada gaariga International (Kremenchug).
Waayo, gaadiidka rakaabka conveyances dadweynaha sida waxaa loo isticmaalaa: korontada - gaariga-basaska; gaadiidka Motor - basaska, basas, taxi rakaabka. Waxaa jira boosteejada basaska ee wadada Velikotyrnovskaya a, soo socda si ay jid Kiev-Kharkov (E40) halkaas oo mid ka mid safri kartaa Ukraine iyo Europe oo dhan. Sidoo kale, waxaa jira basaska degmada waddooyinka Shevchenko iyo Zenkovskaya. Sidoo kale, waxaa jira laba saldhigyada tareenka magaalada (saldhigyada Kyivska iyo Pivdenna). kuwan raadkaygay Tareenka midoobaan Poltava la Kiev, Kharkov, Kremenchug, Lozovaya iyo Krasnograd. wadada Kiev-Kharkov waxaa electrified iyo bixisaa jidka tareenka si degdeg ah oo raaxo. Electrification of line tareenka Poltava - Kharkov la dhammeeyey bishii August 2008.
Waxaa jira 12 goobaha waxbarashada sare gayiga Magaaladanada. Waxay yihiin: academy stomatological caafimaad Ukraine, Poltava State Deedna Academy, Poltava National University farsamada loo magacaabay ka dib markii Kondratyuk, Poltava National University koriska magacaabay ka dib markii Korolenko, Poltava University of Dhaqaalaha iyo Ganacsiga, Poltava University of Economics iyo Sharciga; waxaa kale oo jira kulliyadaha sida ee: Academy of National Law in Ukraine magacaabay ka dib markii Y. Mudryi, Gudaha Wasaaradda University, Academy Interregional ee Maamulka Shaqaalaha, International University Yurub, University of National Dhaqanka iyo Art Kiev, National tignoolojiga Universityof Ukraine "Kharkiv Polytechnicak Institute", Poltava Institute Business, International Academician Yuriy Bugay ee Sayniska iyo jaamacadda DTU. In magaalada our waxaa jira 52 goobaha waxbarashada guud iyo 54 hay'adaha barbaarinta, oo ka mid ah: 14 hay'adaha cusub nooca (dugsiyada magaalada iyo jimicsi). 2 dugsiyada gaarka ah ee maskax ahaan ama jir ahaan caruurta naafada. 1 dugsiga fiidkii. 5 goobaha waxbarashada gaarka ah.
Poltava leeyahay khayraadka dabiiciga ah cajiib, booska dhaqaale iyo juquraafi haboon. Taasi waa sababta on dhulkeeda waxaa jira shirkado badan oo, takhasusay shidaalka, cuntada, warshadaha iftiinka iyo alwaaxa. Poltava yaalo aan ka fogayn qodniinka- badan, dhismaha mashiinka iyo xarumaha sayniska sida Kiev, Kharkov, Dnepropetrovsk in fadilay horumarinta dhismaha mashiinka iyo warshadaha kiimikada. magaalada Our siinayaa 1/4 ee wax soo saarka warshadaha ee gobolka.
Last update:19 April 19